बजेट जेठ १५ मै, आचारसंहिता लाग्दैन: आयोग - Karobar National Economic Daily
बजेट जेठ १५ मै, आचारसंहिता लाग्दैन: आयोग
query_builderMay 11, 2017 7:20 AM supervisor_account निरु अर्याल visibility966
काठमाडौंः सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यसवर्ष समयमै बजेट नआउने आशंका बढिरहेका बेला सबै अन्योल चिर्दै सरकारले जेठ १५ मै बजेट आउने स्पष्ट पारेको हो । बजेटका लागि तयारी भइरहेको र संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट प्रस्तुत गरिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन नगरी बजेटको मिति फेरबदल गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तथा सरकार फेरबदलजस्ता कारणले बजेटको मिति सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन निर्देशन नदिएको तथा संविधानविपरित बजेटको मिति सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले बजेटको मिति संविधानमै उल्लेख भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताले बजेट ल्याउन कुनै अफ्ठ्यारो नपर्ने बताए । “जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर संविधानमै व्यवस्था छ,” उनले कारोबारसँग भने, “त्यसैले निर्धारित मितिमै बजेट आउँछ ।”
रेग्मीले बजेटको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढेको भन्दै संघीय संरचनामा आधारित बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । संविधान संशोधन गरेर मात्रै बजेटको मिति सार्न सकिने भन्दै उनले बजेटको समयबारे अन्योलमा नरहन आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा बजेट ल्याउँदा आचारसंहिताविपरित हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि हाल बजेट ल्याउन सकिने जनाएको छ ।
आगामी वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्दै केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् । “बजेट संघीय संरचनामा आधारित नै आउँछ, कति प्रतिशत बजेट दिने भन्ने बिषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन तर बजेट जेठ १५ मै आउँछ,” रेग्मीले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुनेछ । यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनेगरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । “कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषय राजनीतिक विषय हो तर अर्थले संघीय मोडलको बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ,” उनले भने । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएर निर्माण भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले अब आउने बजेटमा सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्,” उनले भने, “त्यसमा कति पपुलिष्ट कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूमा भर पर्छ ।” उनले तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउने गरी तीव्र रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको विषय नितान्त राजनीतिक भएको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन थालिसकेको जनाएको छ ।
पहिलोपटक संघीय संरचनामा बजेट आउन लागेको र स्थानीय तहमा यसपटक सिधै बजेट पठाउने गरी काम भइरहेको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४० प्रतिशतसम्म बजेट स्थानीय तहमा पठाउने गरी काम अघि बढेको छ । “भौतिक पूर्वाधार विशेषका कार्यक्रमहरू भने केन्द्रमै रहने छन्,” उनले भने, “पूरै बजेट तल जाँदैन, प्रदेशको टुंगो नलागेकोले त्यसको पनि केन्द्रले नै हेर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।”
उनका अनुसार यस पटकको बजेटमा धेरै पपुलिष्ट कार्यक्रम भने पर्ने छैनन् । यस्तै खुद्रे कार्यक्रमहरू भने केन्द्रमा रहने छ्रैनन् । “शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमको बजेट पठाउन पनि समस्या छैन,” ती अधिकारीले भने, “जहाँ समस्या छ, त्यो टुंगो नलागुन्जेल केन्द्रमै रहन्छ र केन्द्रबाटै परिचालित हुनेछ ।” उनका अनुसार अर्थले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रमहरूको काँटछाँट गरिरहेको छ । “विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यक्रम टुंगिएर आउन थालेका छन् बजेटको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ,” उनले भने ।
आचारसंहिता लाग्दैन: आयोग
निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिए पनि सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनसक्ने बताएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको मिति सार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारले चाहेमा बजेट जेठ १५ मै ल्याउनसक्ने बताएका हुन् ।
“बजेटको मितिभन्दा १५ दिनपछि दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति भएकोले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम भने ल्याउन मिल्दैन,” उनले भने, “अन्य अवस्थामा नियमित बजेट ल्याउन आचारसंहिताले रोक्दैन ।” उनले बजेट संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आचारसंहिता नलाग्नेगरी ल्याउन सुझाव दिए ।
उनका अनुसार आचारसंहिताले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम रोखेर प्रभावित पार्न खोजेमा त्यस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्धित हुनेछन् । यसअघि आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउदा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट